Pueraria extract firming lifting skin big breast massage body cream for women wholesales - နှုတ်ခမ်း | မျက်စိ Cream| facial မျက်နှာဖုံး |L ကို Otion | facial Cream | မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ OEM / လိမ္မော်ရောင်, လက်ကားအရောင်း
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » Pueraria extract firming lifting skin big breast massage body cream for women wholesales
ထုတ်ကုန်အမည်: Big boobs cream လုပ်ဆောင်ချက်: Breast enlargement, firmness, lifting, nourishment
ထုပ်ပိုး: 1kg 2kg 3kg or customized Shelf Life:3Years
အရောင်: Customed MOQ:3အပိုင်းပိုင်း
အဓိကပါဝင်ပစ္စည်း: Pueraria extract, ginseng extract, glycerin မော်ဒယ်နံပါတ်: J-FX
မူလအစရာ: ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်နိုင်ငံ ပုံစံ: မုန့်
လက်မှတ်ပေးခြင်း: ISO ကို,GMP,MSDS Supply နိုင်ခြင်း: 1000 Kilogram/Kilograms per Day
ထုပ်ပိုးအသေးစိတ် customize ဆိပ်ကမ်း foshan port guangzhou port
ကြာမြင့်ချိန် : Shipped within 15 days after payment is made
The factory has more than 30 fully automated assembly lines, integrating production, filling and weighing. The largest mixing boiler is 500kg, the daily output of mask is 50,000 အပိုင်းပိုင်း, the daily filling volume of ampoules is 50,000 bottles, and the daily output of automatic cigarette making machine 50,000 to meet the needs of large customers
Forme company products are based on the ” ဘေးကင်း,ပိုပြီးပြုပြင်,အသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအပေါ်အလွန်တာ ၀ န်ယူမှုရှိသောအရည်အသွေးကိုရှာဖွေခြင်း 100 % မူရင်းဂေဟစနစ်ပစ္စည်းသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးနည်းပညာဖြစ်ပါတယ်, ကုန်ကြမ်းပုံသေနည်း, အရည်အသွေးအစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု, ထုတ်ကုန်၏နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာနှင့်အလှအပပြုပြင်ထိရောက်မှုတိုးတက်စေရန်အလို့ငှာအလှပြင်ပြုပြင်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စနစ်တကျသုတေသနစစ်ဆေးမှု၏အခြားရှုထောင့်များ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်“ နှလုံးသားဖြင့်တန်ဖိုးကိုတည်ဆောက်ခြင်း” ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုလိုက်နာသည် ,ပျော်ရွှင်မှုနဲ့အလှအပကိုမျှဝေပါ”,တက်ကြွစွာ "တာဝန်၏တန်ဖိုးကိုအယူအဆထွက်သယ်ဆောင်,တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့်မျှဝေခြင်း”, ငါတို့သည်လည်းလူမှုဖူလုံရေး၏ဖြန့်ဝေဖို့အာရုံကို play, တက်ကြွစွာတာဝန်များကိုတက်ကြွစွာလိုက်စားခြင်းနှင့်အလှအပဖို့သဘာဝပါပဲ.
တစ်ဦးက: ဟုတ်ကဲ့. သငျသညျပြီးသားသင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခဲ့ကြပါလျှင်,ကျွန်တော်တို့ကိုစတစ်ကာတွေပို့ပေးနိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ဒီဇိုင်းကိုပေးနိုင်တယ်။(MOQ တစ်ခုချင်းစီကိုအထုပ်အဘို့ရှိပါတယ်).
တစ်ဦးက: အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ပုံမှန်အားဖြင့် 15 ~ 30 ရက်, အသေးစိတ်ပေးပို့သည့်ရက်စွဲဖြစ်သင့်သည်
တစ်ဦးက: ကျနော်တို့အမြန်ခြင်းဖြင့်တင်ပို့မည်. ထိုသို့သော FedEx အဖြစ်, DHL, TNT စသည်တို့(လေကြောင်းခရီးဖြင့်သို့မဟုတ်ပင်လယ်နားမှာက)